UParker ukhuluma ngokubaluleka kweNedbank Cup | News24
UParker ukhuluma ngokubaluleka kweNedbank Cup
Johannesburg - Umgadli weKaizer Chiefs uBernard Parker uthi Amakhosi "kuzomele enze umsebenzi" awine iNedbank Cup.
IGlamour Boys izobhekana neqembu elidlala ku-NFD iStellenbosch FC emzuliswaneni ka-last-16 emdlalweni ozoba seMoses Mabhida Stadium eThekwini ngoMgqibelo ebusuku.
Njengoba ukwehlulwa kwabo yi-Orlando Pirates kulimaze amathuba okuthatha isicoco seligi, ingcindezi ilokho ikhule njalo kuSteve Komphela kwazise selokhu afika akaze athathe sicoco esikhulu futhi usesalelwe yizinyanga ezintathu kuphele kwinkontileka yakhe.
OLUNYE UDABA: I-PSL ibeke AmaZulu icala ngokuziphatha kwabalandeli
UParker ukuqonda kahle okumele bakwenze.
“Kumele senze umsebenzi,” kusho uParker kwi-website yekilabhu.
“INedbank Cup yithuba lokuthathela ikilabhu isicoco, siphinde senzele nomqeqeshi nathi badlali.”